Articles | ONLINE SCHOOL
FREEBIES for everyone. For your Exam Focus. We know what you need. Short revisions are made especially for candidates. Before your exam, you should take the short revisions of the whole subject for each chapter. LCCI Level 1 &2Bookkeeping and Accounts LCCI...
LCCI 2019 Exam Timetable
LCCI Exam Timetable 2019 အချိန်ဘယ်လောက်ယူသင့်လဲ LCCI Level2Bookkeeping & Accounting ဖြေဆိုမယ့်ကျောင်းသူ/သားတွေက ပုံမှန်စာလုပ်ရင် သင်ယူလေ့ကျင့်မှုနဲ့ Test တွေလေ့ကျင့်ပြီး Past Paper လေ့ကျင့်တာအပါအဝင် ၄လ (သို့) ၅လ လောက်အချိန်ယူသင့်ပါတယ်။ LCCI Level 3...
Cost နဲ့ Benefit ဆိုရာမှာ Cost တခုအကုန်အကျခံလိုက်တိုင်း တန်ပြန် Benefit တခုတော့ရှိစမြဲဖြစ်သလို Benefit ကလည်းများသင့်တယ်ဆိုတာလေးသတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ သိနားလည်နေပြီးသူတွေရှိသလို တချို့လူငယ်တွေသတိမထားမိတာတွေရှိနေလို့သတိလေးလက်တို့လိုက်ပါတယ်။...
Your Target 2018
Target 2018 Bookkeeping & Accounting ကို Feb မှာစပြီးသင်ယူလေ့ကျင့်ပါက ၄လ ၅လအတွင်းပြီးမြောက်နိုင်ပြီး Accounting နှင့် တန်ဖိုးတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ Cost & Management Accounting ကို ဆက်လက်သင်ယူပြီး 2018 December တွင် Diploma in Accounting LCCI ( UK )...
Study Plan ဘယ်လိုဆွဲထားလဲ ! စပြောချင်တာက ဒီနေ့ကစပြီးကြိုးစားကြပါ။ နက်ဖြန်ကစပြီးကြိုးစားမယ်လို့မတွေးပါနဲ့။ Online Learning လုပ်နေသောသူများနှင့် စလုပ်မည့်သူများအတွက် စာဘယ်လိုလုပ်မလဲ Plan ချထားပါ။ ကိုယ်ပိုင် Plan ရှိနေသူများကို်ယ့် Plan အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။...